महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! परशुराम क्षेत्रमा मकर संक्रान्ति मेलाको चहल पहल बढ्यो
धेरै धन कमाउन र स्वस्थ रहने चाहना छ भने यो पढ्नुहोस् ।
अशुभ बाट बच्न चाहनुहुन्छ भने यि कार्यहरु नगर्नुहोस…
सुन केवल गहना लगाउनका लागि मात्र होइन, बच्चा जन्माउनका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण ठहरिएको छ ।
ज्योतिष बिज्ञानअनुसार कुन अक्षर भएका ब्यक्तिको कस्तो चरित्र ?